Raha mbola manana solosaina ianao na ny solosaina findainy miaraka amin'ny connection Internet, tsara ianao handeha. Mila miditra amin'ny tranokala ofisialy ianao hanao ny famandrihana. Ohatra, Manana tambajotra rail, izay manome anao ny fahaiza-boky ny saran-dalana.
Ny sasany amin'ireo toerana azonao tsidihina amin'ny fampiasana mora fiaran-dalamby tapakila ao Eropa dia misy – Alicante, Amsterdam, Barcelona, Bern, Bucharest, Copenhagen, Dusseldorf, Hamburg, Oslo, Prague, Salzburg, ary ny hafa.
Ho faly ny fantaro fa izay rehetra any Eoropa firenena manana ny rail Network sy ny rafitra famandrihana tapakila. Afaka mahita ireo rail mpandraharaha levitra nivarotra tapakila fiaran-dalamby in Eoropa nandritra ny vanim-potoana eny-.
Taonina ny dia lavitra avy any amin'ny izao tontolo izao dia handeha hanao fividianana, indrindra rehefa nandeha ho any Eoropa. Noho izany, filaza mandidin 'dia manamarina fa ny entana, ny saran-dàlana, sy ny nokasainy hatao alohan'ny famandrihana levitra tapakilan'ny lamasinina any Eropa.